Wasaaradda maaliyadda Puntland oo wakiillada u sheegtay in siyaasadaha xukuumadan iyo tii hore aysan ku lug lahayn miisaaniyadda – Kalfadhi
Golaha wakiillada Puntland ayaa maanta mar kale kulan iyo dood ka yeelanaya arrimaha miisaaniyadda dowladda ee saggaalka bilood ee sanadkan ka haray. Miisaaniyad kooban oo saddex bilood ku ekayd oo goluhu ansixiyay bishii janaayo ayaa dhaqangalkeedu ku eg yahay maanta.
Wasiirka maaliyadda, xisaabiyaha guud ee dowladda iyo saraakiil sar sare oo ka tirsan wasaaradda ayaa goluhu arrinta miisaaniyadda su’aalo kulul ka weydiiyay sabtidii.
Xildhibaanada qaarkood ayaa ka hadlay miisaaniyadda golaha la horkeenay in aysan ku dhisnayn siyaasadda xukuumadda cusub ee goluhu ansixiyay, maadama miisaaniyadani ay u diyaarsan tahay sidii tii sanadkii hore la adeegsaday ayna diyaarisay xukuumadii hore.
Wasaaradda maaliyadda ayaa sheegtay in miisaaniyaddan aan loo cuskan karin arrimo siyaasadeed. Xisaabiyaha guud ee Puntland Cabdirisaaq Siciid Nuur oo golaha uga jawaabay arrintaas wuxuu sheegay in miisaaniyadan ay ka kooban tahay mushaar shaqaale, adeegga wasaaradaha & hay’adaha dowladda iyo hawlgallada amniga oo keliya.
“lacagta adeegga bulshada ama wax kale lagu jiheeyo baa siyaasad la yiraahdaa” ayuu yiri xisaabiyaha guud ee Puntland. Wuxuu sheegay in dowladdu ay weli la tacaalayso in ay xal u hesho arrimaha miisaniyadda ku jira.
Miisaaniyadda golaha hortaal tobankii cisho ee u dambeeyay oo laga soo dheegtay tii sanadkii hore 2018 ayaa saggaalka bilood ka kooban $54 milyan. Saddexdii bilood ee sanadka u horeeyay ayaa xukuumaddu ku shaqaysay $18 milyan taas oo bishiiba uu ku yimi isdhin dhan $3 milyan, sida uu sheegay wasiirka maaliyaddu.